Is it possible to do localization in user crated values? - MYSTERY ZILLION
Is it possible to do localization in user crated values?
Website မှာ language localization လုပ်ထားပါတယ်။ သက်ဆိုင်ရာ language config file တွေထဲမှာ array နဲ့ predefined values တွေတည်ဆောက်ပြီး Front-end မှာ user က ပြောင်းလိုက်တဲ့ langauge ပေါ်မူတည်ပြီး ပြပေးပါတယ်။ ဒါက လက်ရှိလုပ်ထားတဲ့ဟာပါ။
အခု user ဘက်က create လုပ်လိုက်တဲ့ value တွေကို localization လုပ်ဖို့ ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင် သိချင်ပါတယ်။ ဥပမာ user က category တစ်ခုတည်ဆောက်လိုက်တယ်ဆိုပါစို့။ Category Name ကို English လို "Fashion" လို့ create လုပ်လိုက်တယ်။​ အဲဒါဆို "Fashion" ဆိုတဲ့ value က database ထဲမှာ English text "Fashion" နဲ့ သွားသိမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ Front-end မှာပြတဲ့အခါမှာလည်း English လို "Fashion" လို့ပဲပြနေမှာပါ။
ဒီအချိန်မှာ user က language ကို "Chinese" လို့ ပြောင်းလိုက်တယ်။​ အခြား predefined လုပ်ထားတဲ့ text တွေကတော့ Chinese လို ပြောင်းသွားပေမယ့် User create လုပ်ထားတဲ့ "Fashion" ကတော့ English လိုပဲပြနေပါတယ်။​ ဒီအခြေအနေမှာ Fashion ဆိုတဲ့ user create လုပ်ထားတဲ့ value ကို Chinese ဆိုပြီး localization လုပ်ဖို့ ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင် သိချင်ပါတယ်။
လုပ်လို့မရဘူးရယ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်နည်းက user ကို input လက်ခံကတည်းက English လိုကော Chinese လိုပါ ထည့်ခိုင်းတာ။
နောက်တစ်နည်းက User ထည့်လိုက်တဲ့ value ကို backend ကနေပြီးတော့ English to Chinese Translate လုပ်ပြီးတော့ သိမ်း။ ပြီးတော့မှ User အသုံးပြုတဲ့ Language ပေါ်မူတည်ပြီး Chinese ပဲဖြစ်ဖြစ် English ပဲဖြစ်ဖြစ် ပြန်ပြတာမျိုးလုပ်လို့ရပါတယ်။
ပထမ တစ်နည်းကတော့ ပိုပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်။ ဒုတိယနည်းက အကယ်၍ User ကို English လိုရိုက်ထည့်ပါဆိုတာကို တခြား ဘာသာစကား တစ်ခုခုနဲ့ ရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ရင် translate လုပ်ပြန်တဲ့အခါမှာ အခက်အခဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ Language detect တွေကိုပဲ စဉ်းစားရမှာပါ။
ဒါပေမယ့် တကယ်တမ်းလက်တွေ့သုံးနေတဲ့အရာတွေမှာ User က ရိုက်လိုက်တဲ့တန်ဖိုးကို သူရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့ တန်ဖိုးအတိုင်းပဲ ပြန်ပြတာ များပါတယ်။ ဘယ်လို language setting မျိုးပဲထားထား။ အစောကြီးကတည်းက သူက တရုတ်လိုမြင်ချင်ရင် နဂိုကတည်းက တရုတ်လိုပဲ ရိုက်ထည့်ခိုင်းတာ ပိုသဘာဝကျမယ်လို့ ထင်တယ်။